Ezempilo, intsha nobuhle
Ukuphila kwethu kwanamuhla kugcwele ukucindezeleka, izinkinga kanye nokukhumbuza kokusebenza nezithiyo. Kuba nzima kakhulu ukuba sihlale sinobuhle, ukubukela impilo yethu. Kuthatha isikhathi nomzamo, futhi wonke amandla asebenza. Thina simatasa kakhulu, njalo sisheshe ngandlela-thile, siphila ekugijimeni. Ukuthambekela kwethu kithi kanye nokuphila kwemvelo embi - ngakho-ke izinkinga zempilo ezimbi. Kodwa konke okudingekayo ukuhlanganisa nezidingo zomzimba wakho. Ukwazi ukulalela isimo sakho sangaphakathi, uvumelanise zonke izinqubo zakho zokuphila. Wonke umuntu ufuna ukuhlala isikhathi eside. Kodwa ukuze siphile impilo ende, sihlale sinempilo futhi sisebenzayo - kubonakala ngathi umsebenzi ongenakwenzeka. Akunzima njengoba kubonakala. Nazi amathiphu ambalwa ayisisekelo okukusiza ukuba uthole impilo futhi ugcine iminyaka ezayo. Ukuphila kwethu kwanamuhla kugcwele ukucindezeleka, izinkinga kanye nokukhumbuza kokusebenza nezithiyo. Kuba nzima kakhulu ukuba sihlale sinobuhle, ukubukela impilo yethu. Kuthatha isikhathi nomzamo, futhi wonke amandla asebenza. Thina simatasa kakhulu, njalo sisheshe ngandlela-thile, siphila ekugijimeni. Ukuthambekela kwethu kithi kanye nokuphila kwemvelo embi - ngakho-ke izinkinga zempilo ezimbi. Kodwa konke okudingekayo ukuhlanganisa nezidingo zomzimba wakho. Ukwazi ukulalela isimo sakho sangaphakathi, uvumelanise zonke izinqubo zakho zokuphila. Wonke umuntu ufuna ukuhlala isikhathi eside. Kodwa ukuze siphile impilo ende, sihlale sinempilo futhi sisebenzayo - kubonakala ngathi umsebenzi ongenakwenzeka. Akunzima njengoba kubonakala. Nazi amathiphu ambalwa ayisisekelo okukusiza ukuba uthole impilo futhi ugcine iminyaka ezayo. 1. Thola ubuthongo obuningi. Esinye sezici ezibaluleke kakhulu ekugcineni impilo, intsha nobuhle ukuphumula okuhle. Ukwehluleka kokulala, kungakhathaliseki ukuthi ngenhloso noma ngenxa yokungalali, kubangela ukukhathala okwedlulele, ukungahambi kahle, ukunganakwa. Lokhu kungaholela ekuhlaselweni kwezifo eziningi ngenxa yokungasebenzi kahle kwesimiso somzimba. Ukulala kungcono ukuzivikela komzimba. Ngakho qiniseka ukuthi ulala njengoba umzimba wakho udinga. Wonke umuntu udinga, ngokwesilinganiso, amahora ayisithupha kuya kwesishiyagalombili ukulala ubusuku bonke. Nakuba abanye abantu banele ngokwanele ukubuyisela amahora amahlanu okulala, kanti omunye akwanele, ayishumi. 2. Ukuzivocavoca njalo. Impilo, intsha nobuhle akunakwenzeka ngaphandle kokuvivinya umzimba njalo. Imidingo iyadingeka ukwandisa umzimba. Ingabe unesakhiwo esiyinkimbinkimbi semisebenzi yomzimba, noma uhambe nje - uzozizwa kangcono kakhulu. Lokhu akusho ukuthi udinga ukwenza okuthile okuphazamisayo. Khetha isifundo ngendlela oyithandayo. Ungakwazi ukubhukuda, ukugibela ibhayisikili, ukudlala i-tennis - yenza noma yini! Kubalulekile ukuthi uhola impilo esebenzayo. Ngena ngaphakathi kwezemidlalo njalo! 3. Yidla ukudla okunempilo. Ukuze ugcine umzimba onempilo, omncane futhi omuhle kukho konke ukuphila kwakho, udinga ukufunda ukuthi ungadla kanjani kahle. Yiqiniso, i-burger endaweni ye-bistro yendawo iyamnandi, kodwa ayisebenzisi. Ukudla okusheshayo okunamafutha amaningi kanye nekhalori kuyingozi empilweni yakho. Kubalulekile ukuthuthukisa umkhuba wokudla ukudla ocebile amaprotheni. Kumelwe kuthathwe imifino noma imifino eluhlaza, izithelo ezintsha, okusanhlamvu ngezinhlamvu ezigcwele, ilayisi elibomvu, isinkwa esiphelele kanye ne-pasta kusuka kolweni kakade. Lokhu akusho ukuthi kufanele ushiye amaswidi kanye ne-dessert. Kodwa kufanele ufunde ukuwasebenzisa ngokulinganisela. 4. Gcina isisindo esihle. Kubantu abanokuqhathanisa ngokweqile kwandisa umthwalo enhliziyweni nangemuva. Ukuze uhlale usebenza futhi wenze lokho okuthandayo, isisindo sakho kufanele sibe ngaphakathi kwebanga elijwayelekile. 5. Qinisekisa ukuthi unezakhi zomzimba eziyisisekelo. Akukhathaleki ukuthi ukudla okunempilo esikudlayo kunempilo. Kungenzeka ukuthi asitholi zonke izakhi esizidingayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi omega-3 fatty acids, okusiza ukugcina impilo yenhliziyo yethu. Lo mzimba utholakala ezinhlanzi. Kodwa ukuhlinzeka ngesilinganiso nsuku zonke se-asidi, inhlanzi kuyodingeka idle nsuku zonke nakwabaningi. Ngakho-ke, kudingeka sigcwalise le gap ngokufaka amafutha wezinhlanzi. Okufanayo kusebenza kwamanye amavithamini amaningi namaminerali. Indlela yokuphila enempilo izosiza ukugcina impilo enempilo hhayi nje kuphela, kodwa futhi iyokwenza injabulo emoyeni. Lokhu kubalulekile esikhathini sethu esinzima, esinamandla. Ukuvumelana nawe ngokwakho, ukwaneliseka empilweni - lezi yizinto ezibalulekile zokuphila okude nokujabulisayo.
1. Thola ubuthongo obuningi. Esinye sezici ezibaluleke kakhulu ekugcineni impilo, intsha nobuhle ukuphumula okuhle. Ukwehluleka kokulala, kungakhathaliseki ukuthi ngenhloso noma ngenxa yokungalali, kubangela ukukhathala okwedlulele, ukungahambi kahle, ukunganakwa. Lokhu kungaholela ekuhlaselweni kwezifo eziningi ngenxa yokungasebenzi kahle kwesimiso somzimba. Ukulala kungcono ukuzivikela komzimba. Ngakho qiniseka ukuthi ulala njengoba umzimba wakho udinga. Wonke umuntu udinga, ngokwesilinganiso, amahora ayisithupha kuya kwesishiyagalombili ukulala ubusuku bonke. Nakuba abanye abantu banele ngokwanele ukubuyisela amahora amahlanu okulala, kanti omunye akwanele, ayishumi.
2. Ukuzivocavoca njalo. Impilo, intsha nobuhle akunakwenzeka ngaphandle kokuvivinya umzimba njalo. Imidingo iyadingeka ukwandisa umzimba. Ingabe unesakhiwo esiyinkimbinkimbi semisebenzi yomzimba, noma uhambe nje - uzozizwa kangcono kakhulu. Lokhu akusho ukuthi udinga ukwenza okuthile okuphazamisayo. Khetha isifundo ngendlela oyithandayo. Ungakwazi ukubhukuda, ukugibela ibhayisikili, ukudlala i-tennis - yenza noma yini! Kubalulekile ukuthi uhola impilo esebenzayo. Ngena ngaphakathi kwezemidlalo njalo!
3. Yidla ukudla okunempilo. Ukuze ugcine umzimba onempilo, omncane futhi omuhle kukho konke ukuphila kwakho, udinga ukufunda ukuthi ungadla kanjani kahle. Yiqiniso, i-burger endaweni ye-bistro yendawo iyamnandi, kodwa ayisebenzisi. Ukudla okusheshayo okunamafutha amaningi kanye nekhalori kuyingozi empilweni yakho. Kubalulekile ukuthuthukisa umkhuba wokudla ukudla ocebile amaprotheni. Kumelwe kuthathwe imifino noma imifino eluhlaza, izithelo ezintsha, okusanhlamvu ngezinhlamvu ezigcwele, ilayisi elibomvu, isinkwa esiphelele kanye ne-pasta kusuka kolweni kakade. Lokhu akusho ukuthi kufanele ushiye amaswidi kanye ne-dessert. Kodwa kufanele ufunde ukuwasebenzisa ngokulinganisela.
4. Gcina isisindo esihle. Kubantu abanokuqhathanisa ngokweqile kwandisa umthwalo enhliziyweni nangemuva. Ukuze uhlale usebenza futhi wenze lokho okuthandayo, isisindo sakho kufanele sibe ngaphakathi kwebanga elijwayelekile.
5. Qinisekisa ukuthi unezakhi eziyisisekelo ezanele . Akukhathaleki ukuthi ukudla okunempilo esikudlayo kunempilo. Kungenzeka ukuthi asitholi zonke izakhi esizidingayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi omega-3 fatty acids, okusiza ukugcina impilo yenhliziyo yethu. Lo mzimba utholakala ezinhlanzi. Kodwa ukuhlinzeka ngesilinganiso nsuku zonke se-asidi, inhlanzi kuyodingeka idle nsuku zonke nakwabaningi. Ngakho-ke, kudingeka sigcwalise le gap ngokufaka amafutha wezinhlanzi. Okufanayo kusebenza kwamanye amavithamini amaningi namaminerali.
Indlela yokuphila enempilo izosiza ukugcina impilo enempilo hhayi nje kuphela, kodwa futhi iyokwenza injabulo emoyeni. Lokhu kubalulekile esikhathini sethu esinzima, esinamandla. Ukuvumelana nawe ngokwakho, ukwaneliseka empilweni - lezi yizinto ezibalulekile zokuphila okude nokujabulisayo.
Amathiphu ama-10 mayelana nendlela yokulondoloza impilo yakho
Mayelana ne-PMS yafundwa
Ukusetshenziswa kwe-lime amafutha abalulekile
Ama-fleas kubantu: izimpawu, ukwelashwa, isithombe
Into esemqoka yezempilo yi-wheatgrass
Indlela yokwenza isibalo slim futhi sinhle: imithetho engu-4 yomqeqeshi waseHollywood ithembisa umphumela oqondile!
Yiziphi izidakamizwa ezisetshenziselwa amazinyo omzimba wamazinyo?
Kuyini ukugcoba umzimba futhi kuhluke kanjani ekusikeleni massage zakudala
I-Horoscope yamathole ngonyaka we-tiger ngo-2010
Ukushisa nokugcoba kuyinhlanganisela eyingozi
IWundlu ne izaqathe
Inkukhu yokugcoba nge utamatisi no-anyanisi
Indlela yokuphuma ekudleni kokunye okunye okunye okunye okunye okunye okunye okunye okunye
Amazambane othosiwe anamakhowe
UKhisimusi wama-Orthodox 2016: ukuhalalisela, izingoma izinkondlo zezingane, ama-carols
Sandwich nge inkukhu kanye utamatisi omiswe ilanga
Ubani ongamthathi, noma Yini ongayishintsha ekuziphatheni kwakho ukuze ushade
Indlela yokunqoba ukuncika ekuxhumaneni nomphakathi
Izindlela eziningana zokuvuma uthando lwakho
Inqubo yokufundisa izingane ukubhukuda